वैसे, योजना आप्रवासन २०० Since देखि लगानी भिसा आवेदकहरु लाई मद्दत गरीरहेको छ।
हामीसँग सफलताको लामो इतिहास छ।
के छ लगानी रकम?
प्रविष्टिहरूको अधिकतम संख्या नाघ्यो।
E-2 भिसा के हो?
E-2 भिसा, अन्यथा लगानीकर्ता भिसाको रूपमा चिनिन्छ, एक गैर-आप्रवासी भिसा हो जसले उद्यमीहरू र व्यवसाय मालिकहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ जुन व्यवसायमा लगानीको आधारमा उनीहरूले सक्रिय रूपमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नेछन्। अमेरिकामा। जबसम्म तिनीहरू चाहन्छन्।
E2 भिसा को लागी कसले आवेदन दिन सक्छ?
E-2 लगानी भिसालाई विचार गर्ने कुनै पनि सम्भावित E-2 लगानीकर्ताको लागि पहिलो चरण भनेको तपाईं यसको लागि आवेदन दिन योग्य हुनुहुन्छ वा छैन भनी निर्धारण गर्नु हो।
E-2 भिसाको लागि आवेदन दिन, तपाईं यस देशको वैध राहदानीको साथ एक सन्धि देशको नागरिक हुनुपर्दछ।
के श्रीमती र पति दुबै एक E2 सन्धि देश बाट हुनु पर्छ?
हैन, जब सम्म तपाइँ एक E2 भिसा सन्धि देश को एक राष्ट्रीय को रूप मा योग्य हुनुहुन्छ, तपाइँको श्रीमती वा पति र बच्चाहरु एक संधि देश बाट हुनु पर्दैन।
E2 भिसा आवश्यकताहरु के हुन्?
E-2 आवेदन को मूल्यांकन मा, कन्सुलर अधिकारीहरु लाई निर्धारण गर्नु पर्छ कि:
1) आवश्यक संधि अवस्थित छ;
2) व्यक्तिगत र/वा व्यापार संधि देश को राष्ट्रीयता को स्वामित्व;
3) आवेदकले लगानी गरेको छ वा सक्रिय रूपमा लगानी को प्रक्रिया मा छ;
4) उद्यम एक वास्तविक र संचालन वाणिज्यिक उद्यम हो;
5) आवेदक को लगानी पर्याप्त छ;
6) लगानी एक सीमान्त भन्दा मात्र एक जीविकोपार्जन को लागी एक हो;
7) आवेदक "विकास र उद्यम" उद्यम को स्थिति मा छ;
8) आवेदक, यदि एक कर्मचारी, एक कार्यकारी/पर्यवेक्षी पद को लागी नियत छ वा संयुक्त राज्य अमेरिका मा फर्म को संचालन को लागी आवश्यक कौशल को मालिक छ; र
)) आवेदकले संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्न चाहन्छ जब E-2 स्थिति समाप्त हुन्छ।
E-2 भिसा कति समय को लागी मान्य छ?
E2 इन्भेस्टर भिसा तीन महिना देखि पाँच बर्ष को लागी हो, तपाइँको राष्ट्रीयता को देश मा निर्भर गर्दछ, र अनिश्चितकाल को लागी विस्तार गर्न सकिन्छ।
E2 भिसा प्रक्रिया कति समय लाग्छ?
हामी अझै पनि फाइल गर्न 1 देखि2महिना लाग्छ, तर वाणिज्य दूतावासहरू धेरै ब्याकलॉग छन् र अन्तर्वार्ताहरू व्यवस्थित गर्न6महिना लाग्छ। जबसम्म, तपाईंले US सरकारले $2,500 को द्रुत शुल्क तिर्नुभएन र तपाईंले 14 दिनमा आफ्नो जवाफ पाउनुहुनेछ!
ब्याकलगहरू व्यवहार गर्दा, ती मितिहरू सामान्य प्रशोधन समयमा फिर्ता जानेछन्।
के मेरो श्रीमती/पति मेरो E2 भिसा मा काम गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, तपाइँको श्रीमान् वा श्रीमतीले वर्क परमिट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई EAD पनि भनिन्छ, जुन तपाइँको भिसा प्राप्त गरे पछि to ० देखि १२० दिन लाग्छ।
के म मेरो E-2 भिसा मा जागिर पाउन सक्छु?
तर तपाईंको पति वा पत्नीले सजिलै US काम प्राधिकरण प्राप्त गर्न र जहाँ पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ।
के मेरा बच्चाहरु मेरो E-2 भिसा मा स्कूल/विश्वविद्यालय जान सक्छन्?
21 वर्ष मुनिका सबै बच्चाहरूलाई तपाईंसँग E-2 मा अमेरिका आउन र अध्ययन गर्न अनुमति दिइनेछ।
के हुन्छ यदि म विगतमा एक SSN भएको छु?
सामाजिक सुरक्षा नम्बर कहिल्यै समाप्त हुन्छ, त्यसैले यदि तपाइँ अतीत मा एक थियो, तपाइँ अझै पनी एक छ।.
मलाई कति लगानी गर्न आवश्यक छ?
USCIS नियम अनुसार कुनै न्यूनतम मूल्य छैन, चाहे तपाइँ इन्टरनेट मा के पढ्नुहुन्छ।
लगानी व्यवसाय को प्रकार को लागी तपाइँ लगानी गर्न छनौट को लागी पर्याप्त हुनु पर्छ।
जे होस्, हाम्रो कम्पनीले हामी $60,000 मा ह्यान्डल गर्नेछौं को लागी एक न्यूनतम राख्न छनौट गरीएको छ।
म कहाँ बाट E2 लगानी पैसा पाउन सक्छु?
आवेदकले प्रमाणित गर्नु पर्छ कि उनीहरु कोष को कब्जा र नियन्त्रण मा छन् (पैसा उनीहरुको हो) र कि उनीहरुले वैध तरीका बाट पैसा प्राप्त गरे। कोष बचत, विरासत, उपहार, र fromण बाट हुन सक्छ। त्यसोभए हो, एक loanण लगानी कोष को लागी योग्य हुन सक्छ जब सम्म नयाँ व्यापार 'सम्पत्ति notण सुरक्षित छैन। सबै कोष एक वैध स्रोत बाट उत्पन्न भएको हुनुपर्दछ, जसको अर्थ अमेरिकी सरकार जान्न चाहान्छ कि बचत मा तपाइँको पैसा कहाँ बाट आयो (तपाइँ यो कसरी पाउनुभयो) र भले पनि एक उपहार यदि तपाइँलाई पैसा दिने व्यक्तिले पैसा प्राप्त गर्नु पर्छ। प्रमाणित हो।
यस प्रकार, प्रश्न को जवाफ मँ मेरो लगानी को लागी एक anण को उपयोग गर्न सक्छु हो यति लामो छ जब सम्म यो व्यापार को सम्पत्ति संग सुरक्षित छैन।
त्यहाँ आवश्यक कागजात को एक ठूलो सौदा "ट्रेस" को लागी शुरू बाट अन्त्य सम्म कोष को स्रोत (अन्त्य ब्यापार 'बैंक खाता हो) को लागी आवश्यक छ। कागजात को केहि उदाहरणहरु मा शामिल हुनेछ; बैंक कथन, documentsण कागजात, एक पूर्व काम बाट कथन, तार स्थानान्तरण रसिदहरु, र अधिक।
के खर्च एक E2 लगानी को रूप मा योग्य छ?
कुनै पनि खर्च दुबै वर्तमान र अतीत सीधा संचालन वा व्यापार को स्टार्टअप संग सम्बन्धित छ कि तपाइँको E2 लगानी को रूप मा योग्य हुन सक्छ।
- व्यापार अधिग्रहण वा साइट समीक्षा को उद्देश्य को लागी अमेरिका को यात्राहरु
- कार्यालय खर्च
- कानूनी शुल्क
- कारहरु यदि व्यापार को लागी आवश्यक छ
- कम्पनी सेटअप
- मार्केटि खर्च
- फोन, ल्यापटप
- पेटेन्ट र आईपी
- सफ्टवेयर लाइसेन्स
- आवश्यक व्यापार वा व्यक्तिगत इजाजतपत्र
मैले कहिले E-2 भिसा लगानी पैसा खर्च गर्नु पर्छ?
E2 भिसा लगानी पैसा 'प्रतिबद्ध र जोखिममा' हुनु पर्छ यो भिसा को लागी आवेदन गर्नु अघि एक लगानी को रूप मा योग्य हुन को लागी।
यसको मतलब यो हो कि तपाइँ ब्यापार खर्च मा पैसा खर्च गर्नु पर्छ, न केवल यो तपाइँको बैंक मा बसेको छ।
तपाइँलाई कार्यशील पूँजीको रूपमा केहि नगद कायम राख्न अनुमति छ।
हाम्रो कम्पनी बैंक मा ग्राहक को नगद राख्न मनपर्छ - कार्यशील पूंजी - मा वा 10% कुल लगानी को तल।
के म E2 लगानी गुमाउँछु यदि मेरो E2 भिसा अस्वीकृत हुन्छ?
होइन, तपाइँ अझै पनी तपाइँको ब्यापार को सबै सम्पत्ति को मालिक हुनुहुन्छ।
फरक मात्र यो हो कि तपाइँ अमेरिका मा रहन सक्नुहुन्न, तपाइँ धेरै विदेश बाट तपाइँको ब्यापार ब्यवस्थापन गर्नुहुन्छ।
घर खरीद E2 भिसा को लागी एक लगानी को रूप मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ?
लगभग सबै अवस्थामा, जवाफ होईन। यद्यपि, यदि घर व्यवसायको अभिन्न अंग हो भने, त्यसोभए तपाईं सक्नुहुन्छ।
उदाहरण को लागी, एक काम गर्ने फार्म जहाँ घर समग्र व्यापार को हिस्सा हो गिनती हुनेछ।
वा यदि तपाईंको व्यवसाय घरहरूको पुन: निर्माण गर्दैछ।
कुन व्यवसाय E2 भिसा को लागी योग्य छन्?
सूची लगभग असीमित छ। जे होस्, ब्यापार जुन निष्क्रिय आय मात्र अचल सम्पत्ति लगानी जस्ता प्रतिबन्धित छ। यो एक व्यवसाय हो कि तपाइँ सक्रिय रूप मा चलाउनु पर्छ।
के म E2 भिसा प्रयोजनहरु को लागी एक व्यापार साझेदार हुन सक्छ?
हो, व्यापार को 50% सम्म।
के म ई -२ भिसा मा म संग कर्मचारीहरु ल्याउन सक्छु?
हो, तपाइँ तपाइँको भिसा प्राप्त गरे पछि, यदि त्यहाँ एक साँचो व्यापार आवश्यकता छ, उनीहरु एक 'आवश्यक कर्मचारी भिसा' को लागी योग्य हुनेछन्।
हामी बिल्कुल सकदिन यहाँ तपाइँको सबै प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस्।
यदि तपाईंसँग थप प्रश्नहरू छन् भने, कृपया "अहिले सुरु गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्
म तपाईंलाई शुभ समाचार बताउन चाहान्छु कि हिजो हिजो मैले मेरो भिसाका लागि अन्तर्वार्ता लिएको छु र तपाईंलाई खुशी लागेको छ कि मेरो भिसा स्वीकृत भयो र years बर्षको लागि! म एकदम उत्साहित छु! व्यापार योजना को लागी तपाईले गर्नुभएको प्रयासका लागि धन्यबाद। यो हामीलाई अलि अलि गाह्रो भयो र हामी जान्दछौं, तर म तपाईंलाई यसको साथ टाँसिएको र यसलाई सही बनाउन प्रयास गर्न जारी राख्नु भएकोमा म यसको कदर गर्छु। हामी अन्तमा त्यहाँ पुग्यौं! ???? तपाईलाई धेरै नै शुभकामना दिईएको छ र फेरि महान परिणामको भाग बन्नु भएकोमा धन्यबाद!
एन्ड्रयू शेपिन को हुन्?
अरू केहि भन्दा पहिले, कृपया उहाँलाई जाँच्नुहोस्
'EB5 इन्भेस्टर्स' पत्रिकामा। यो प्रकाशन आप्रवासन उद्योग सबैभन्दा सम्मानित प्रकाशन मध्ये एक हो।
एन्ड्रयू Shepin पूर्व सरकार लाइसेन्स प्राप्त दर्ता लगानी सल्लाहकार हो
उनले ३ बर्ष पहिले भविष्यवाणी गरेका थिए कि ठूला परियोजनाहरु मध्ये अधिकांश धेरै जोखिममा छन्
हो, हुन सक्छ, होईन।